Imaaraatka iyo Baxreyn oo isu gaashaan buureystay Soomaaliya - BBC News Somali
Image caption Wasiirka arrimaha dibedda Baxreyn Sheekh Khaliifa
Balse saansaanta hadda muuqata ma ahan mid wanaagsan, wuxuuna dagaal adag ka socdaa baraha bulshada oo la'isku dhaafsanayo aragtiyo qaraar.
Dowladda Soomaaliya waxa ay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah, iyada oo diiday in ay la kala safatay dhinacyada is hayay.
Go'aanka wasiirka ayaa micno gaar ah samaynaya maadaamaa dhawaanahan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku shaqaynayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga si uu waqti ugu helo dib u habeynta ciidanka lagu samaynayo.
Imaaraatka ayaa sheegay in lacagtii lagu qabtay garoonka Aadan Cadde in loo waday ciidammada militariga Soomaaliya oo ay mushaar ahayd. Lama oga xiriirka ka dhaxeeya lacagta la qabtay iyo go'aanka lagu laalay heshiiskii militariga ee labada dal.